गगन थापाको अर्थमन्त्रीलाई जवाफ–बहस कहाँ गरौं
काठमाडौ‌ं । नेपाली कांग्रेस नेता गगन थापाले पुस्तकमा लगाइएको करबारे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । मन्त्री खतिवडाको पुस्तकमा कर लगाएको हो, ज्ञानमा कर लगाएजस्तो दिग्भ्रमित नपार्नुस् भनेका थिए । पुस्तकमा लगाइएको कर हट्दैन, बरु बहस गर्न तयार छु भनेको भोलिपल्ट नेता थापाले ट्विटरमार्फत बहस गर्न तयार रहेको जवाफ दिएका हुन ।
थापाले टुइटमा लेखेका छन्, ‘विद्धान अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएछ– ‘पुस्तकमा कर लगाएको हो, ज्ञानमा होइन, करको विषयमा बहस गर्न तयार छु । मन्त्रीज्यू हामी पनि तयार छौं,’ ‘बहस कहाँ गरौं–संसदमा, विश्वविद्यालयमा वा माइतीघर मण्डलामा ?’ यस अघि थापाले भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मेन्सन गर्दै ‘पुस्तकमाथिको कर पठन संस्कृति र पढ्न पाउने अधिकारसंग जोडिएको छ। नागरिकले पढ्नु सरकारका लागि चुनौति बनेको हो भने एक नेपालीले एक बर्षमा कति पुस्तक पढ्न पाउने हो त्यो पनि बताइदिनोस्। पढ्न नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास विरुद्ध सदन र सडकबाट हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ।’
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका डा. खतिवडाले बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वदेशी उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्न ज्ञानमा नभई पुस्तकमा कर लगाएको र आफू बहस गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।